UDkt Elinor Garely - okhethekile ku-eTN kanye nomhleli oyinhloko, iwayini.travel
Amawayini & Imimoya
November 24, 2021 1 I-2 min ifunde
Ucwaningo lweReuters lunqume ukuthi Iwayini lesiFulentshi ukukhiqizwa kwezimboni kungenzeka kwehle cishe ngamaphesenti angama-30 kulo nyaka, uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, okwenza u-2021 njengonyaka omubi kakhulu kusukela ngo-1970 futhi okungenzeka kube unyaka omubi kakhulu emlandweni.
Izimbangela zalezi zindaba ezimbi zihlanganisa isithwathwa sika-April, isiphithiphithi se-Covid 19, impi yezohwebo kaMongameli uTrump eqondise amawayini aseFrance, izikhukhula zasehlobo ezihlangene nezinga lokushisa eliphezulu okuholela ekwakhekeni kwesikhunta emivinini ecekele phansi isivuno esiningi.
Abathandi bewayini kufanele bathole iwayini labo lesiFulentshi MANJE ukulungiselela isikhathi samaholide futhi bazame ukugwema ukukhuphuka kwamanani esitolo semali.
2020 Domaine Girard, Sancerre, Les Garnnes. Sauvignon Blanc
I-Sancerre itholakala emaphethelweni asempumalanga wendawo yesivini esikhulu sase-Loire Valley futhi iseduze ne-Cote d'Or e-Burgundy kunezinye izifunda zewayini ezibalulekile zase-Loire e-Anjou naseTouraine. Indawo ye-viticultural ihlanganisa ama-milles angu-15 wamagquma osebeni olusentshonalanga ye-Loire namahektha angu-7000 wezivini ezinikelwe ekukhiqizeni iwayini le-appellation.
Izinhlobo zenhlabathi zihlukaniswe izigaba ezintathu: ushoki, i-limestone-gravel, ne-silex (flint). I-Flint ivame ukuhlonishwa ngephunga elihlukile lentuthu i-fusil (gunflint) kanye nesizathu segama mbumbulu lika-Sauvignon elithi Blanc Fume.
I-Sancerre yaziwa ngamawayini ayo amhlophe, anephunga elimnandi, enziwe nge-Sauvignon Blanc. I-Sancerre yakudala imhlophe, ine-asidi eqinile enamanothi ama-gooseberries, utshani, izimbabazane kanye ne-stony minerality. I-Phylloxera yaqothula izivini ezinkulu phakathi nekhulu le-19 ichitha amathrekhi ezinhlobo eziningi zewayini elibomvu njenge-Gamay ne-Pinot Noir. Izivini zatshalwa kabusha e-Sauvignon Blanc futhi indawo yathola isimo se-AOC ngo-1936.
I-Domaine Girard Sancerre yango-2020. Amanothi. 100% Sauvignon Blanc. I-Domaine Fernand Girard iqondiswa ngu-Alain Girard, elandela ezinyathelweni zezizukulwane zabenzi bewayini edolobhaneni lase-Chaudoux, eliqhele ngamamayela ambalwa enyakatho-ntshonalanga yeSancerre nasenyakatho yeCavignol. Isivini sihlanganisa amahektha ayi-14 kanti u-Girard uthengisa amanye ama-cuvees kwabaxoxisana naye futhi ngokwakhe ubhodlela ingxenye yomkhiqizo ophelele ngaphansi kwegama lakhe lomndeni. I-La Garenne cuvee yavela esivini esingamahektha angu-2.5 endaweni eyimmango ebheke empumalanga enenhlabathi enamatshe kakhulu e-limestone. Umhlabathi oshotshoki uthuthukisa isici se-Sauvignon Blanc esinetshe letsheza, amaminerali kanye nohlaza.
Ifa lisebenzisa ubuchwepheshe besimanje obuhlanganisa umshini wokucindezela umoya, izinsimbi zensimbi engagqwali, uhlelo lokulawula izinga lokushisa ngesikhathi sokuvutshelwa kanye nesikhala esine-air-conditioning sokuguga kuma-vats namabhodlela esitokisini. Nakuba ubuchwepheshe kuyikhulu lama-21, izindlela zendabuko zisetshenziswa esivandeni somvini lapho imithi yokubulala ukhula nemithi yokwelapha isetshenziswa kancane, futhi imvubelo yezentengiselwano ayethulwa ukuze ivubele noma ingeze ukunambitheka. Umphumela uyi-Sancerre eletha iphunga elimnandi, kanye ne-asidi entsha ene-astringency ephansi.
Alain Girard - Isithombe ngu-Noah Oldham
Iso livuzwa ngegolide eliphuzi eliphaphathekile kanti ikhala libona izinongo, ikhasi likalamula, utshani obusha obuluhlaza, ama-apula aluhlaza, izingcezu zikalamula kanye nensengetsha. Ihambisana kahle nenhlanzi emhlophe eyisicaba ku-caper sauce kodwa ime yodwa ngamandla nesithunzi.
Funda Ingxenye Yokuqala lapha: Ukufunda ngamawayini e-Loire Valley ngeSonto le-NYC
© UDkt Elinor Garely. Lo mbhalo we-copyright, ofaka nezithombe, awunakukhiqizwa kabusha ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela kumbhali.
I-ATM 2022: Umgudu wesikhathi eside wohambo nokuvakasha eMpumalanga Ephakathi
I-Empire State Building ihlonipha Usuku Lokuzalwa luka-The Notorious BIG Lweminyaka engama-50
Kushone abangu-27, kwalimala inqwaba emlilweni omkhulu eNew Delhi
OMongameli be-Skal Asia Bamukelwe Ubuso Nobuso eBangkok
Previous Izimbadada Isisekelo Umumo Omkhulu! Inc. Ukudala Ukumamatheka
Olandelayo I-Hawaii ivalelisa ku-COVID-19
UBryce Baker uthi:
Novemba 24, 2021 ku-12: 49
Okunye "yiphutha likaTrump."
Izintela zase-US zaziyimpendulo yoxhaso olungalungile lwe-EU ku-Airbus, njengoba kuphawulwe yi-WTO. Izintela bezihloselwe ukuletha ukulingana ekuhwebeni kwe-US-EU. Kungaba usizo ukuxoxa yonke indaba futhi weqe ukusola uTrump.